आजदेखि जिरो ब्यालेन्समा फेसबुक चलाउन र युट्युब हेर्न मिल्ने ! फोन गर्दा पनि पैसा लाग्दैन ! – OnlinePahar
आजदेखि जिरो ब्यालेन्समा फेसबुक चलाउन र युट्युब हेर्न मिल्ने ! फोन गर्दा पनि पैसा लाग्दैन !
२८ माघ २०७७, बुधबार ०८:३६ Basanta Khanal	0 Comments	#NTC
नेपाल टेलिकमले व्यालेन्स नहुँदा पनि कुरा गर्न सकिने अफर ल्याएको छ । यो बेला ब्यालेन्स न्यून भई आफन्तसँग सम्पर्क गर्न नपाएका करीब दुई लाखभन्दा बढी सिम प्रयोगकर्ताका लागि सोमबार राती १२ बजेदेखि निःशुल्क सेवा शुरु गरिएको टेलिकमले जनाएको छ । अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाको निर्देशनमा ब्यालेन्स न्यून भएर कल गर्न असमर्थ नम्बरका लागि जिरो ब्यालेन्स प्याकेज उपलब्ध गराएर यो सेवा शुरु गरिएको हो । लकडाउनमा रिचार्ज नपाइने भएकाले यो सेवा अपरिहार्य थियो । ब्यालेन्स कम भएर फोन गर्न असमर्थ नम्बरका लागि जिरो ब्यालेन्स प्याकेजमा २५ वटा अन–नेट एसएमएस, ५० मिनेट अन–नेट भ्वाइस, १०० एमबी डाटा, प्याकेजको अवधि सात दिनको हुनेछ ।यस प्याकेज आगामी दुई दिनसम्म उपलब्ध गराइने बताइएको छ ।सो प्याकेजको प्राप्त गर्ने ग्राहकलाई एसएमएसमार्फत जानकारी पठाइने, उक्त एसएमएसको निर्धारित जवाफ एसएमएसमार्फत पठाएर प्याकेज लिन सकिने,सो प्याकेज लिन अयोग्य नम्बरमा पनि प्याकेज प्रदान गर्न नसकिएको सन्देश पठाइ जानकारी गराइने छ । उक्त प्याकेज कम्पनीका जिएसएम तथा सिडिएमए प्रिपेड ग्राहकलाई उपलब्ध हुने छ ।
← पाथिभरा माताले हामीसबैको रक्षा गरुन, आज मिति २०७७ चैत ३ गते मंगलवारको राशिफल पढौं
शेयरमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ खुशीको खबर : नौ अर्ब रुपैयाँको आईपीओ निष्कासन हुँदै →
जीवन विकास लघुवित्तको शेयर रजिष्ट्रारमा एनएमबि क्यापिटल (ओपनिङ रेञ्ज कति ?)
२८ माघ २०७७, बुधबार ११:११ Basanta Khanal	0
२८ माघ २०७७, बुधबार १०:४९ Basanta Khanal	0
सिन्धुपाल्चोकमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको बाढीले छाडेपछि यस्तो देखियो मेलम्ची बजार क्षेत्र [फोटोफिचर]